गएराति चिनियाँ राजदुत र प्रधानमन्त्रीबिच के भयो कुराकानी ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more गएराति चिनियाँ राजदुत र प्रधानमन्त्रीबिच के भयो कुराकानी ?
मंसिर ३ गते, २०७७ - ०८:५९
काठमाडौं । नेकपाभित्र विवाद चुलिएको बेला चिनियाँ राजदूतले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरेकी छिन् ।
यो भेटवार्ता नेकपा सचिवालय बैठक बोलाइएको अघिल्लो राती भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई भेटन चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी मंगलबार राती बालुवाटार पुगेकी थिइन ।
प्रधानमन्त्री निवासमा करिब डेढ घण्टा लामो भेटका अवसरमा नेकपा भित्र विवादबारे होउले जिज्ञासा राखेको श्रोतले बतायो ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रपति शीले नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन बलियो भएको देख्न चाहेको बताउँदै शीले विवादलाई एकताको जगमा हल गर्न चाहेको शीको चाहना रहेको
बताएकी थिइन । यसका साथै शीले नेपाल र चीनबीच सीमा विवादका बारेमा उठेको विवादका बारेमा समेत चर्चा गरेको श्रोतको दावी छ ।
चीनले नेपालका कम्युनिष्ट एकतामा जोड दिँदै आएको छ ।
नेकपा सचिवालय बैठक आज बस्दैछ । यसअघि पनि नेकपाभित्र विवाद चुलिएको बेला राजदूत यान्छीको सक्रियता बढेको थियो । त्यसबेला यान्छीले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, ओली, माधव नेपाल लगायतका नेताहरुलाई अलग–अलग भेटवार्ता गरेकी थिइन् । भारतीय मिडियाले यही विषयमा यान्छीको आलोचना समेत गरेका थिए ।
मंसिर ३ गते, २०७७ - ०८:५९ मा प्रकाशित